Qarax Suuq Gelitaan ah | Martech Zone
Qarax Suuq Gelitaan ah
Jimce, Maarso 23, 2012 Isniintii, September 23, 2013 Douglas Karr
Sida a wakaaladda suuq geynta, Waxaan u maleyneynaa inay tahay wax lagu farxo inaan noqono wakiilo dhanka hore ee isbadalka cajiibka ah ee warshada wakaalada. Laga soo bilaabo iibiyeyaasha ilaa naqshadeeyayaasha, qof kastaa wuxuu si aad ah ugu fiirsanayaa sawirka weyn ee suuqgeynta internetka halkii uu ka shaqeyn lahaa aagagga ama aagagga raaxada. Ka shaqeynta warbaahinta oo dhan waxay keenaysaa natiijooyin aad u badan greater laakiin ma sahlana!
Suuqgeynta waxay ahaan jirtay mid ku saabsan bixinta dareenka dhagaystayaashaada oo aad isku dayayso inaad ka weeciso wixii ay horay u sameynayeen. Laakiin mahad websaydhka, ciyaarta ayaa is beddeshay. Suuqgeynta gudaha waxay koobeysaa xeelado fara badan oo soo jiita macaamiisha iyaga oo siinaya macluumaad waxtar leh, oo la xiriira. Adoo adeegsanaya suuq geynta, waxaad eber kaheli kartaa macaamiisha doonaya inay iibsadaan waxaad iibiso. Waxaan sahamineynaa sida ballaaran ee suuq geynta ay u qabsatay iyo sida ganacsatadu ay ugu guuleysanayaan 2012. Laga soo bilaabo bogga 'G +', Qarixii Suuqgeynta Inbound.
Tags: hubkaagaadiidka tooska ahmarketing inboundboggaga soo degayajiilka ledsuuq geyn dibedda ahraadinta lacagta lehSEOwarbaahinta bulshada
CMO waxay soo bandhigtay Hagaha Isdhexgalka ee Muuqaalka Bulshada
In saaxiibkay muujiyo dhammaadka xilli iyo hanti maguurtada ah ee mid kale. Warbaahinta bulshada ayaa ah ereyga… wax layaab leh ma leh shirkado ku soo qulqulaya iyada sida sagxadaha badda iyo sandwiches.
Waxaan u maleynayaa in mareegta bulshada ay sii kordheyso in kasta oo, waxaan arki doonaa isbeddelka ganacsiga sidoo kale. Si aad uga dhex shaqeyso barnaamijkan cusub ee bulshada, waa inaad noqotaa mid bulsheed. Ganacsiguna horay ugama baran jirin inay ahaato mid bulsheed… waa cabsi ay ku qabaan iyaga. Iyagu waa inay bartaan inay ahaadaan ama ay dhintaan. Bannaan oo fudud.
Macaamiisha ma rabaan inay dareemaan inay u suuq yihiin. Suuqgeynta gudaha waxay ku saabsan tahay ku biirista wadahadalka, halkii laga bilaabi lahaa. Macaamiisha baahi qaba waxay isku dayayaan inay xalka raadiyaan. Ka shaqeynta suuq geynta inbound waxay hagaajineysaa fursadaha aad xalkaas ku noqoneyso.
Badhtanka jaantuskan - sumadaha ma khaldan yihiin? Dibad bax waa hoose, Inbound ayaa sare?
Aniga waxay ila tahay inaad saxan tahay! @freighter ayaa ogaaday isla markii aan soo dhejinay (whew… annagu maannaan qaabeyn midkaas!).